healthy benefits – စာမကျြနှာ 8 – Healthy Life Journal
———၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊——— သွားများကို တောက်ပစေခြင်း နေ့တိုင်း ငှက်ပျောခွံကို သွားတွေပေါ်မှာ တစ်မိနစ်ခန့် အချိန်ပေးပြီး ပွတ်တိုက်ပေးတာကြောင့် သွားတွေကို ဖြူစင်စေပါတယ်။ ၀က်ခြံသက်သာခြင်း ငှက်ပျောခွံကို မျက်နှာပေါ်ကပ်ပြီး နှိပ်ပေးပါ၊ ၀က်ခြံတွေကို သက်သာစေပါတယ်။ တစ်ပတ်အတွင်းရလဒ်က သိသာမှာဖြစ်ပါတယ်။ အရေးကြောင်း...
သွယ်လျကျန်းမာ သွက်လက်စေဖို့ မျှတစွာစားသုံးပါ . . .
—–၊ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် တစ်ဂရမ်စားတိုင်း ကယ်လိုရီ လေးယူနစ်ရပါတယ်။ အရွယ်ရောက်သူတစ်ယောက်က တစ်နေ့ကို ကယ်လိုရီ ပျှမ်းမျှအားဖြင့် ၂၀၀၀ လိုပါတယ်။ လှုပ်ရှားမှုနည်းတဲ့ သူတွေဆို တစ်နေ့ကို ၁၃၀၀ လောက်ပဲ လိုပါတယ်။...
———၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊——— အိမ်ထောင်ရှင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ သူရဲ့နိစ္စဓူဝ အလုပ်ကိစ္စတွေမှာ ပျော်မွေ့ပြီး ၀ါသနာပါရာ အလုပ်တွေကိုလည်း လုပ်ခွင့်ရနေမယ်ဆိုရင် လူမှုဆက်ဆံရေးလည်း ကောင်းမွန်နေပါလိမ့်မယ်။ အိမ်ထောင်မှုဘ၀မှာ အဆင်ပြေတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က အိမ်ထောင်မှုဘ၀မှာ အဆင်မပြေတဲ့ အမျိုးသမီးနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင် အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ လုပ်ငန်းခွင်မှာ စိတ်ဖိစီးမှုဆိုင်ရာ ဟော်မုန်း...
ကျန်းမာအောင်နေထိုင်ခြင်းဖြင့် မကူးစက်နိုင်သော ရောဂါများကို ကာကွယ်ပါ
—၊ ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊— Q. မကူးစက်နိုင်တဲ့ ရောဂါတွေဆိုတာ ဘယ်လိုရောဂါတွေ ပါဝင်ပါသလဲ ဆရာ။ A. မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကူးစက်တတ်တဲ့ ရောဂါတွေသာမက မကူးစက်တတ်တဲ့ ရောဂါတွေလည်း များနေပါတယ်။ မကူးစက်တတ်တဲ့ ရောဂါတွေဆိုတာ သွေးတိုးရောဂါ၊...
—၊ ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ၊— Q. ဘယ်လိုအဆီတွေက ကျန်းမာရေးအတွက် မသင့်တော်ဘူးလဲဆရာ၊ ဘယ်လိုအဆီတွေက စားလို့ရပါသလဲ။ (သန်လျင်သဘာဝတရားရိပ်သာမှ မေးမြန်းသူတစ်ဦး) A. တိရစ္ဆာန်အဆီရှောင်ရမယ်၊ ဒါပေမဲ့ ငါးအဆီတွေဖြစ်တဲ့ ငါးမြင်းအဆီ၊ ငါးဒန်ဗိုက်သား စတာတွေကို စားလို့ရပါတယ်။...
ကျန်းမာဖို့ နို့သောက်စို့ . . .
———၊ မီမိုးမေ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ဘယ်အသက်အရွယ်မဆို အဆီနည်းတဲ့ နို့နဲ့ နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေကို စားသုံးတာကြောင့် သက်ရှည်ကျန်းမာတာ၊ စိတ်ခံစားမှုကောင်းတာနဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းနိုင်တာ စတဲ့ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေကို ရရှိစေကြောင်း သိပြီးဖြစ်မှာပါ။ အခုအခါ သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့ လတ်တလောလေ့လာအတည်ပြုထားတဲ့ ကောင်းကျိုးတွေကို ဖော်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။...
———၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊——— (၁) နေ့စဉ် ၁၀-၃၀ မိနစ်ခန့်လမ်းလျှောက်ပါ။ လမ်းလျှောက်ရင်းပြုံးပါ။ ဒီနည်းဟာ စိတ်ဓာတ်ကျတာကို သက်သာစေပါတယ်။ (၂) တစ်နေ့အနည်းဆုံး ၁၀ မိနစ်ခန့် ငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်တဲ့ အခန်းထဲမှာ ထိုင်ပါ။ (၃) နံနက်အိပ်ရာထချိန်မှာ တစ်နေ့တာလုပ်ရမယ့် ကိစ္စတွေ...
ကာကွယ်ဆေးက ဘယ်လိုထိရောက်မှုရှိသလဲ . .
——— ၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊——— ကာကွယ်ဆေးက လူတိုင်းကို အသက်ရှည်ရှည်နေနိုင်မယ့် အခွင့်အရေးပေးပြီး ကျန်းမာတဲ့ဘ၀ ပိုင်ဆိုင်စေပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေးက တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက် အခြေခံအုတ်မြစ်ပါ။ ကာကွယ်ဆေးက ကူးစက်တတ်တဲ့ ရောဂါဝေဒနာတွေကြောင့် နာမကျန်းမှုမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးပြီး အရွယ်မတိုင်ခင် သေဆုံးမှုကို ဟန့်တားပေးပါတယ်။...
အဆီကျဆေးနဲ့ ပိန်ဆေးက တူပါသလား . . .
—၊ ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊— Q. ပိန်ချင်လို့ဆိုပြီး အဆီကျဆေးသောက်နေသူတွေ ရှိလို့ပါ။ အဆီကျဆေးနဲ့ ပိန်ဆေးက တူပါသလား ဆရာ။ A. အဆီကျဆေးနဲ့ ပိန်ဆေးက မတူပါဘူး။ ပိန်ချင်လို့ဆိုပြီး အဆီကျဆေးသောက်တာက မှားပါတယ်။...
ထောပတ်အသင့်အတင့်စားရင် ကျန်းမာစေတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက် ၇ ရပ်
——–၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——– ထောပတ်က အ၀လွန်တယ်၊ နှလုံးအတွက် မသင့်တော်ဘူး စသဖြင့် ပြောခဲ့ကြပေမယ့် အခုလတ်တလောမှာ ဆိုးဆေးမပါဘဲ သဘာဝနို့အစစ်နဲ့ ထုတ်ထားတဲ့ ထောပတ်ကို အသင့်အတင့်စားပေးရင် ကျန်းမာစေတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက် ၇ ရပ် ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့-...